ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး ဥက္ကဌ ဇင်ဝိုင်း ဘာလုပ်နေလဲ?(၂) ~ Myanmar Express
ကော့သောင်းမလိဝမ်ရေတံခွန်တွင် လက်စွမ်းပြရိုက်ကူးထားသော ပန်းချီဆရာပြည်စိုးထွန်းရဲ့ရိုက်ချက်များ
Myanmar Express Posted in: ဆင်ခြင်စရာ,ရုပ်ရှင်ဇတ်လမ်း
1 May 2012 17:56
ကောင်းတယ်လေ ကြည့်လို့ ခိခိ
ကော့သောင်းမြို့ ကလူများကိုယ်စား ဒီလိုထောင်ထွက်တဏာရူး နာဘူးဓါတ်ပုံဆရာပြည်စိုးထွန်းကို အရေးယုပေးပါခင်ဗျာ...
2 May 2012 18:57
ကော့သောင်းမြို့က ထောင်ထွက်တဏာရူးနာဘူး ဓါတ်ပုံဆရာပြည်စိုးထွန်း ကိုအရေးယူပေးပါ ဦးဇင်ဝိုင်းခင်ဗျား
အေ၇းယု ပေးပါ ဒီဓါတ်ပုံဆရာကို
ဇင်ဝိုင်း ဘာလုပ်နေလဲ ဟုတ်လားဖဲရိုက်နေတယ်ကွ..
4 May 2012 10:52
ဟုတ်လိမ့်မယ်။ သူက ရာထူးပဲလိုချင်တာလေ။ သူလိုချင်တဲ့ရာထူးရပြီဆိုတော့ ကျန်တာသူနဲ့မဆိုင်။ငပေါ ဇင်ဝိုင်း။ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေလျှောက်ပြောပြီး .. တကယ့်တကယ်ကျ ရုပ်ရှင်အသိုင်းအ၀ိုင်းအတွက် လုပ်ပေးနိုင်တာမဟုတ်...
မျက်ဖြူဆိုက်လေ ဆရာကြိုက်လေပဲ အဟေ့ဟေ့ဟေ့....နောက်ဆို အလကားကြည့်ရယုံတင်မဟုတ်ဘူး ..အလကားတောင်-ုပ် လို့ ရတော့မှာ..မြန်မာမ အများစု ကို ကောင်းတယ် ဆက်သာလုပ်
4 May 2012 15:35
ကောင်ပါတယ် ဘာဖြစ်လို့ လဲ့ ..ကြည့်တဲ့ သူတွေကို့တဏှာ မျက်စိနဲ့ကြည့်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး...အနုပညာမျက်စိနဲ့ ကြည့်ခိုင်းတာလေ.. .ကြည့်တတ်ရင် ဘာဝနာ...မကြည့်တတ်ရင်တဏှာပါဗျာ..၀ိုင်းပြီး အပစ်မပြော ကြပါနဲ့ ..အားလုံးက ငါ့ဝမ်းပူဆာ မနေသာလို့ကံပေးတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်နေရတာပါ..
4 May 2012 18:01
ဆ ရာ ပြည် စိုး ထွန်း တော် တာ ပေါ့ နောက် ဆို သူ့ သမီး ကို မင်းသမီးတင် ရိုက် လိမ့် မယ် စောင့်မျှော် ကြည့် ရှု့ ကြပါ ခင်ဗျား
နိုင်ငံတော် ကပေး တဲ့ ဆုတွေ အများကြီး ရထားတာနော်ဒါတောင် ဒီ ပုံ တွေ မတွေ့ သေးလို့ နို့မို့ နိုင်ငံတော် မဟုတ်ဘူိးနိုင်ငံတကာကျော်သွား မယ်
ကောင်မလေး ကကြည့်လို့ ကောင်းသားပဲ မဆိုးပါဘူး
အဲ့ဒီ ကောင်မလေးက လူတယောက်လုံးတောင်မမြင် ဘူလား
မြန်မာ အမျိုးသမီး တွေရှေ့ရေးက အဲ့ဒါလား
11 May 2012 22:21
ကြည့်ကျပါအုံးဗျာ။ ။မြန်မာ လူမျိုးတဲ့
11 May 2012 23:52
ယောင်္ကျားတွေပဲ တဏှာရူးတာထင်ခဲ့တာမိန်းမတွေက ပိုဆိုးနေပါလား
good de le kwa,ba ma mhpit bu,...
မင်းမော်ကွန်းေ ကျာင်းနံမည် ကခွေး ဖင် သူ့အဖေ ဇင်ဝိုင်းက နံမည် ဘယ်လို ပေးကြ မလဲ ????????
ရိုက်တဲ့လူကိုချည်းပဲ အပြစ်ပြောလို့ မရဘူးလေ။ ဒီလိုပုံမျိုးကို အရိုက်ခံတဲ့ မိန်းမမျိုး ရှိနေမှတော့ ရိုက်တဲ့လူပဲ လွန်တာမှ မဟုတ်တာ။ လက်ခုပ်ဆိုတာ နှစ်ဖက်တီးမှ မြည်တာလေ။
ရိုက်တော့လည်းကြည့်ရတာပေါ့...ဘယ်သူကများ ကိလေသာကုန်ခန်းနေလို့ လဲ အလကား အပို တွေ လျှောက်ပြောနေတာ
ဆရာကြည်စိုးထွန်း တော်ချက်ကတော့ ကမ်းကုန်ပဲ နောက်ဓာတ်ပုံရိုက်ရင် ခင်ဗျားသမီးကိုယ်လုံးတီးပုံ ကို ရိုက်ပေးပါလား ကြည့်ချင်လို့ပါဗျာ အစဉ်လေးစားလျှက်.........
ရိုက်တဲ့လူကိုချည်းပဲ အပြစ်ပြောလို့ မရဘူးလေ။ ဒီလိုပုံမျိုးကို အရိုက်ခံတဲ့ မိန်းမမျိုး ရှိနေမှတော့ ရိုက်တဲ့လူပဲ လွန်တာမှ မဟုတ်တာ။ လက်ခုပ်ဆိုတာ နှစ်ဖက်တီးမှ မြည်တာလေ။ကိုယ့်စိတ်ပါမှဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေပါ။ခံဖို့လူရှိမှ...............ရတာပါ။
ပြောတော့ ဆင်ဆာပေး ဆင်ဆာပေးနဲ့ ဆင်ဆာတာ အပြည့်ပေးလိုက်ရင် အပြာကားတောင် ရိုက်မယ့် ကောင်တွေး(((((((((((x-
ကောင်း တယ် ဟေ့ ကြည့် လို့
ကောင်း ကောင်း မ မြင် ရဘူး ဗျာ။။။ နောက်ဆို သေချာ ရိုက်ပေး ဖို. ပြော ပေး ပါ။။
4 June 2012 11:10
ဒီင်္ဓါတ်ပုံရိုတ်တဲ့ သူက တော်တော် ၀ါသနာကြီးမယ့် ပုံဘဲနော်
8 June 2012 10:24
13 June 2012 00:42
အပေါ်က အပြစ်ပြောတဲ့ကောင်တွေ မင်းတို့က သူတော်ကောင်းတွေလား?ကြည့်ပြီးမှ အပြစ်ပြောတာ မကောင်းပါဘူးကွာ..ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကြည့်ချင်သိချင်တဲ့ စိတ်ရှိတာကိုက တဏှာမကင်းဘူးဆိုတာ သိသာတယ်နော်..မင်းတို့ အရေးအသားတွေ ကြည့်တာနဲ့ သိတယ်...ဟွန်း။
14 June 2012 09:29
ရိုက်တယ့်လူမှာပဲ အပြစ်ရှိတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အရိုက်ခံတယ့် ကောင်မတွေကလည်း ရှိနေတာကိုအဲ့ဒီ့ အရှက်မရှိတယ့်ကောင်မတွေမှုာလည်း အပြစ်ရှိတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
17 June 2012 02:55
17 June 2012 03:03
အပေါ်ကအကိုတို့ရယ် သူလဲနိုင်ငံတကာကိုအမှီလိုက်တာလေးကိုအပြစ်မပြောကြပါနဲ့မြန်မာဆင်ဆာအဖွဲ့ ကလွတ်လပ်ခွင့်ပေးလိုက်တာဘယ်လောက်တောင်ကောင်းလဲ ရိုဒင်တို့ မိုက်ကယ်အိန်ဂျလိုတို့လိုသူလဲနာမည်ကြီးဦးမှာပါ... သေရင်လေ
ဒီတင်ဘဲ ပြီးတာလား နောက်ကို အကုန်ဆုံးအောင် တင်ပေးပါဗျာ မြန်မာမတွေရဲ့ဆိုးချက်ကတော့ စာဖွဲ့နေရင် အချန်ဘဲ ကုန်ပါတယ်။
ကြိုက် တယ် ဆို တဲ့ အ ကောင် တွေ မင်း တို့ အစ် သာ ဆို ရင် လည်း ကြိုက် ကြ မှာ ပဲ လား
ဒါကို ဒီမိုကရေစီလို့ခေါ်တာလားဟင်၊ ဗိုလ်ချုပ်ပြောတဲ့ ---နိုင်ငံကြီးဖြစ်ဖို့မဝေးတော့ပါ။ ဒီမိုကရေစီဘက်တော် သားများကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
scene အတွက် တန်ရာတန်ကြေး ကြေးစားကိုခေါ်ရိုက်တာဘဲဗျာ. ဗိုလ်ချုပ်ဈေးနဲ့ hotel ကြီးတွေ show room မှာ မိန်းကလေးတွေ ရေချိုးနေတဲ့ပန်းချီတွေအများကြီး. ရိုး၂ တွေးကြပါဗျာ.. ( မင်းနှမ သွားရိုက်ခိုင်းပါလား)လို့ ၀ိုင်းcomment ပေးမယ့်အူကြောင်ကြား ကြောင်သူတော်ကြွက်စုတ်သခိုးတွေ ရှိမယ်ဆိုတာကြိုတွက်ထားပါတယ်..အဲဒီလူတွေက ဟိုကောင်လေးလို ကိုယ့်ဘာသာ အကြိမ် ၅၀ လောက် ဖြေဖြောက်ရင်း အနိစ္စရောက်မယ့်သူတွေ....
ဟေ့ကောင် စောက်ပေါ စောက်တုံး လဘာဂျာ ငစနူ. နလပိန်းတုံးပိုက်ဆံပေးခိုင်းထားတာကွ...မမြင်ခြင်ယောင်ဆောင်နေမှာပေါ့...မင်းနှမ တွေ အမတွေသာ မလုပ်စားစေနဲ့page တခုလုံးလဲ မင်းအသံကြီးဘဲ..fuck..မင်းဘဲခြည်လိုက် ဖြေလိုက်နဲ့..ကြည့်နေတာအကောင်းမှတ်နေလားစောက်ရူးရဲ့..
ဖဲရိုက်နေတယ်၊ KTV သွာတယ်။ ဘာဖြစ်လဲကွာ
21 August 2012 10:59
29 August 2012 10:03
ဖဲရိုက်နေတာဟုတ်လား သိပါဘူး ဖဲရိုက်နေတယ်ပဲထင်တာ
29 August 2012 10:07
29 August 2012 10:12
ချစ်ခင်အပ်ပါသော အစ်ကိုများခင်ဗျား ကျွန်တော် သားသား က ကွန်မင့်တွေအားလုံးကို ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ ဒါပေမယ့် ကော်နက်ရှင်က စလိုးဖြစ်နေလို့ အဲဒါ နည်းစနစ်လေးများသိရင် ဝေမျှစေချင်ပါတယ် အစဉ်ထာဝရ လေးစားလျက် သားသား (ပန်းတောင်း၊ဆင်တဲ)
All are blind! They don't know who is shit head!Very Funny page!
5 October 2012 00:05
16 October 2012 15:51
19 October 2012 16:25
ဇင်ဝိုင်းဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့အရက်သောက်နေမှာပေါ့ရိုက်ထားတာလေးကမဆိုးပါဘူး ကြည့်လို့ကောင်းသားဆက်ကြိုးစားပါ ဓာတ်ပုံဆရာ အားပေးနေမယ်ကန့်ကွက်တဲ့ကောင်တွေကဘာဖြစ်လို့လဲ ပန်းသေနေလို့လားဖင်ခံချင်နေကြလို့လား?
လူဆိုတာနှာဘူးနဲ့မကင်းကြပါဘူး။ဘုန်းကြီးတောင်နှာဘူးကြတယ်။မိန်းမများကလည်းနှာဘူးနေကြတော့မတတ်နိုင်ဘူး။ယခုခေတ်မိန်းခလေးတွေများဆိုရင်-ပိုတောင်ဆိုးသေးတယ်။မိမိကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့လိုပါတယ်။ယောကျာင်္းတွေဟာ(နှာဘူးရင်ဘူး-နှာမဘူးရင်ဂန်ဒူ)လို့ဆိုကြတာဘဲ။ရှင်းရှင်းပြောရရင် ယောကျာင်္းဘဲဖြစ်ဖြစ်/မိန်းမဘဲဖြစ်ဖြစ် အနေအထိုင်လိုပါတယ်။မဆင်ခြင်ရင်တော့ဖြစ်မှာဘဲ။
မြန်မာ လိုးကားလေး ရိုက်ဖို့ အကြံပြု အပ်ပါသည်။ ဇင်ဝိုင်း မာဆတ်ရောက်နေပါသည်။
ဇင်ဝိုင်း ဖာသွားချ နေတယ်
ဟ ကောင်းပါတယ်ဟ ပြတဲ့ဆော်ကတောင် ဘာမှမဖြစ်ဘူးးးမင်းတို့က ဘာဖြစ်နေတာလဲ
hate kg zin wine phar lote nay le' Anonymous
18 November 2012 00:43
ကြာ ကူ လီ ဇင် ၀ို င်း
စောက် ၇ူး ထ နေ တာပါ နာ မည် တော. မ ကြီး ပါ ဘူး နာ ခေါာင်း ပဲ ကြီး လာ တာ
စောက် ၇ူး ထ နေ တာ နာ မည် တော. ကြီး လာ မှာ မ ဟုတ် ဘူး နာခေါင်း ပဲ ကြီး လာ မှာ ဒါ မြန် မာ နိုင် ငံ ကွမင်း အမေ လို.း တိုင်း ပြည် မ ဟုတ် ဘူး
Zin wine is sleeping.
မြင့် သော လူဖြစ်ပြီနိမ့် သောလူဖြစ်အောင်နေကျတယ် စဉ်းစားညဏ်မရှိကျဘူးလာမသိဘူး
29 March 2013 17:45
လူ ကြီး ဆို တာ အ မှား မ လုပ် ပါ ဘူး၊
[image: Photo: မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်တွင် အငှားယာဉ်မောင်းမှ ကားပျက်သည်ဟုပြော၍ သံဃာတော်များမှဆင်းတွန်းပေးစဉ် မောင်းနှင်ထွက်ပြေး ဒဂုံမြို့နယ်၊ သီလဘန်ကျောင်းတိုက်...
လာမယ့်သီတင်းပတ်အတွင်းမှာ ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO နဲ့ အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး အဖွဲ့တို့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ ပထမဆုံး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ သဘောတူည...
သမ္မတ ပြောကြားခဲ့ခြင်းအပေါ် ကျေနပ်မှု မရှိ၍ ဆန္ဒထုတ်ဖော်
ကြေးနီစီမံကိန်း လုံးဝ ရပ်ဆိုင်းပေးရန် နှင့် အခ ကြေးငွေယူ၍ ဆန္ဒထုတ်ဖော်သည်ဟု သမ္မတမှ ပြောကြားခဲ့သည့်အပေါ် ကျေနပ်မှုမရှိသဖြင့် ယနေ့ ညနေ ၃ နာရီ ခန့်တွ...
မီတ္ထီလာဖြစ်စဉ် နှင့်ပတ်သက်၍ သာသနာရေးဝန်ကြီးမှ ၂၁.၅.၂၀၁၃ ရက်နေ့ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် တွင် အသေးစိတ်ရှင်းလင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ် နှင့် ပတ်သက်၍ ၀န...